“Waxaan maqlaa dilal qorshaysan, haddii la gartay inay qorshaysan yihiin, maxaa loo oggaan waayay cidda qorshaynaysa, waa arrin cajiib ah” Garaad C/llaahi Cali Ciid. – Radio Daljir
Bosaaso, Sep 27 – Afhayeenka isimmada Puntland Garaad C/llaahi Cali Ciid ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay dilalka qorshaysan ee had iyo goor ka dhaca Gaalkacyo, Isaga oo dhinaca kalena soo dhaweeyay qodobada heshiiskii Gaalkacyo.
Mar uu ka hadlayay xaaladda dilalka qorsheeysay ayuu Garaad Ciid waxa uu tilmaamay ahamiyadda ay leedahay dhiifoonaanta dadwaynaha, waxana uu sheegay in haddii shacabku si dhab ah ula shaqeeyaan hay’adaha ammaanka, in xal waara laga gaari lahaa dhibaatada nabad-galyo xumo ee magaaladaasi ka jirta.
Garaadku waxa uu arrin cajiib ah ku tilmaamay sida loogu caal-waayay in laga gun-gaaro jihada dilalka fulisa, isaga oo taa ka hadlayana waxa uu yiri “Waxaan maqlaa dilal qorshaysan, haddii la gartay inay qorshaysanyihiin, maxaa loo oggaan waayay cidda qorshaynaysa, waa arrin cajiib ah.”
Dhinaca kalena, afhayeenka Isimmmada Puntland Garaad Ciid waxa uu soo dhaweeyay 10-kii qodob ee ku saabsanaa heshiiska Gaalkacyo ee ay 25-kii Septemabr soo saareen isimmada Puntland, kuwaasoo muddooyinkii danbe ku hawllanaa xal u helidda xaaladda magaalada Gaalkacyo, waxaana garaadku qodobbadaasi uu ku tilmaamay kuwo dan iyo masaalix ugu jirto dadka walaalaha ah ee wada-dagan Gaalkacyo.
Afhayeenka Isimmada Puntland ayaa dawladda Puntland iyo odoyaasha beesha ‘Leelkase’ ugu baaqay inay fuliyaan qodobada heshiiska ah, waxaana uu garaadku ammaan iyo booggaadin usoo jeediyay dhammaan wax-garadkii ka shaqeeyay nabadaynta Gaalkacyo.
Garaad C/llaahi Cali Ciid, afhayeenka isimada Puntland ayaa ugu dambayntii ugu baaqay dadka shacabka ah ee ku dhaqan Gaalkacyo, inay iska qabtaan qofkasta oo ay u arkaan inuu ka shaqaynayo nabad-galyo darro, isla markaana ay si joogto ah ula shaqeeyaan hay’adaha ammaanka ee gobolka Mudug.
Radio Daljir Garowe http://daljir.com/